के नेपाल आइडलका क्रिशल कडेल र सेड्रीना देखिदैछन् एकै चलचित्रमा….? – Nepali Entertainment Site
के नेपाल आइडलका क्रिशल कडेल र सेड्रीना देखिदैछन् एकै चलचित्रमा….?
नेपाल आइडलबाट चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्, क्रिशल कडेल । घादिङका कडेलले नेपाल आइडलमा आएर निकै राम्रो फ्यान फलोअर्स कमाएका छन्। क्युट कडेलले आफ्नो गायकीले धेरैलाई मोहित पार्न सफल भएका छन्। सामाजिक संजालमा पनि उनको निकै राम्रो क्रेज रहेको छ। ‘नाइँ न भन्नु ल ५’ डेव्यु बाल कलाकार सेड्रीना शर्माले पहिलो चलचित्रबाट नै निकै राम्रो फ्यान फलोअर्स कमाउन सफल भइन्।
उनको सुन्दरता र अभिनय दुवैले बजारमा निकै राम्रो चर्चा कमायो। अनुभव रेग्मी संगको उनको जोडीलाई दर्शकले रुचाए। सामाजिक संजालमा पनि उनको निकै राम्रो फ्यान फलोअर्स रहेको छ। सिने नगरीमा यतिबेला क्रिशल र सेड्रीना एकै चलचित्रमा देखिने चर्चा सुरु भएको छ।
गायन संगै अभिनयमा रुची रहेको बताउने क्रिशल र सेड्रीना चलचित्रको बारेमा अन्य कुनै जानकारी बाहिरिएको छैन। तर निर्माण टिम क्रिशलसंग चलचित्रको बारेमा मिटिङ्गमा रहेको बुझिएको छ। सेड्रीना र क्रिशल दुवै एकै चलचित्रमा देखिए भने दुवैका फ्यानका लागी यो खुशीको खबर हुनेछ।
तस्विर: कुशल घतानी राई
भारतीय गायक सनम संग मिस नेपाल अश्मीको प्रेम
मिस नेपाल २०१६ अश्मी श्रेष्ठले अन्तन: आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेकी...
‘डि सिने अवार्ड – २०७६’- सलिन र नम्रता उत्कृष्ट नायक-नायिका
शनिबार राजधानीमा एघारौं 'डि सिने अवार्ड - २०७६' सम्पन्न भएको...
भारतमा श्वेताको शल्यक्रिया लेख्छिन्, ‘जीवनले फेरि मसँग अर्को खेल खेल्यो ।’
अभिनेत्री श्वेता खड्का यतिबेला भारतमा अस्पताल भर्न भएकी छिन्। उनलाई...
तीन रियल लाईफ जोडी, जो देखिदैछन् साथ चलचित्रमा
बर्ष २०७६ धेरै चलचित्रका लागी प्रतिक्षित रहेको छ। रिल लाईफमा...
तेरियाको आवाजमा ‘तिम्रो मायाले बाधेर…’ (भिडियो)
प्रहरी निरीक्षक निर्मलको ‘म जन्मिदा भाग्य’ मा मिलन (भिडियो)
साम्राज्ञीसंग अंकितको जोडी, दशैमा अशोकको ‘रातो टिका निधारमा’
शनिबार ‘जात्रै जात्रा’ देशभर आक्रामक
शनिबार ‘वीरविक्रम २’ हाउसफुल, गोपीकृष्णमा कलाकार पुग्दा यस्तो माहोल (भिडियो)
बर्षा र संजोगले गरे ‘इन्गेजमेन्ट (तस्विरसहित)
केन्द्रिय कार्यालय: नया बानेश्वर, काठमाँडौ । Email :- [email protected] Website :- www.977mag.com